Maqal: Soomaali xiran Xabsiyada Hindiya oo Cabasho nasoo gaarsiiyay. – SBC
Maqal: Soomaali xiran Xabsiyada Hindiya oo Cabasho nasoo gaarsiiyay.
Muwaadiniin Soomaali ah oo kor u dhaafaya 120 Qof islamarkaana ku xiran Xabsi ku yaala Magaalada Mombai ee Caasimad labaada Dalkaasi Hindiya ayaa soo saaray Cabasho xoogleh oo ku saabsan Dhibaatooyin dhanka Nolosha ah oo soo foodsaaray.
Axmed Cabdi Xasan waa Muwaadin Soomaali ah oo ka mid ah Maxaabiistaas ku xiran Xabsiga Mombai waxaana isagoo Wareysi Gaar ah siinayay SBC International ka faalooday dhibaatooyinka waaweyn ee haysta Xabsigaasi.
Waxa uu Sheegay Axmed Cabdi Xasan in Dhibaatooyinka heysta ay ugu weyntahay Nafaqadaro, Raashin la’aan, Xanuuno ayna u dheertay Jirdil waqtikasta ah .
“Qof bin aadan ahi waxa uu u dulqaadan karo ma aha, dhibaatooyinka nagu heysta halkan, Waxaan nahay dad aan wax nafaqo ah heysan oo qaarkood la indha beelay, xanuuno aan garaneyni uu ku dhacay, Jirdil maalin iyo habeen ah, waxaan ugu baaqeyna dowladayadu in ay ka dhageysato, soona farageliso arimahayaga” sidaasi waxaa yiri Axmed Cabdi Xasan .
Waxa uu Sheegay Muwaadinkan in sababaha ugu weyn ee ay Xabsiga ugu jiraan loona heysto ay tahay eedeyn been ah oo ku saabsan in ay yihiin dad burcad badeed ah, isagoo faah faahinna ka bixiyay siyaabaha kala duwan ee dadka qaarkii ay ku yimaadeen goobta.
Hadaba dhageyso Wareysiga Axmed Cabdi Xasan oo Dhameystiran, RIIX AMA DAAR
Dhibaatooyinka heysta Dhalinyarada Soomaaliyeed ma ahan oo qura kuwo ku kooban dhacdooyinkan Ceynkan ah waxaa sidoo kale jira kuwo kale oo aad u daran kana soo wajaha wadamada Caalamka oo ay Hindiya ka mid tahay.